Antiaging Series Mpanamboatra-Wisepowder
Vovony Monosialotetrahexosyl ganglioside Sodium (GM1) vovoka (Volan-kisoa) (37758-47-7)
Monosialylated glycosphingolipid sy ganglioside lehibe amin'ny membanta neuronal sy glial ao amin'ny rafitry ny rafitry ny rafitry ny foibe. Mifanakaiky sy manova ny kinova tyrosine kinases ......
CAD-31 vovoka (2071209-49-7)
Ny vovoka CAD-31 (CAD31) dia tsindry amin'ny atidoha novolavolaina, ny J147-derivative izay nampivoatra ny hetsika neurogenisme mihoatra ny J147 amin'ny sela mpitrandraka neural olombelona (NPC); koa mandrisika ny fizarazarana ny NPC amin'ny ……
Ny vovoka asidra alpha-lipoika / asidra thioctic dia simika toy ny vitamina antsoina hoe «antioksidan». Ny masirasira, aty, voa, epinara, broccoli ary ovy dia loharano tsara amin'ny asidra alpha-lipoika / asidra thioctic. Izy io koa dia natao tao amin'ny .....
Nicotinamide mononukleotida vovony ("NMN", "NAMN", ary "β-NMN") dia nukleotaida nalaina avy amin'ny taolan-taolana sy nikotinamide.Like nicotinamide riboside, NMN dia derivatif niacin, ary manana ny …….
Ny vovony Quercetin (117-39-5)
Ny vovobony Quercetin, ny flavonoid hita ao amin'ny voankazo sy legioma, dia manana fananana biolojika tokana izay mety hanatsara ny fampiroboroboana ny asa ara-tsaina / ara-batana ary hampihena ny mety hisian ny aretina. Ireo fananana ireo no miorina ......
Ny vovoka CMS121 (1353224-53-9)
Ny vovoka CMS-121 (CMS121) dia rakitsary miendrika bokin-tsakafo miorim-paka miaraka amin'ny hetsika anti-fahanterana, neuroprotective, anti-inflammatory, antioxidative, ary hetsika famerenam-bolo. Ao amin'ny biby izy io amin'izao fotoana izao .....
Pyrroloquinoline vovony quinone (72909-34-3)
Pyrroloquinoline quinone (PQQ), vovo-javamaniry misy otrikaina mitovy amin'ny vitaminina mifandraika amin'ny fianakaviana B-vitaminina, dia manana anarana malaza hafa, toy ny methoxatin, BioPQQ, sns PQQ voajanahary …….
Ny vovony J147 (1146963-51-0)
Ny vovony J-147 dia zava-mahadomelina fanandramana vaovao izay novolavolaina ho fitsaboana mety ho an'ny aretin'i Alzheimer. Hatreto, ny fanadinana vita amin'ny voalavo dia mampiseho fampanantenana be dia be. J147 dia nitatitra valiny tamin'ny .....
be taona & Antiaging (Antiaging)
Ny fahanterana dia zavatra ataontsika rehetra nefa tsy dia azontsika loatra. Ny atidohanao dia miatrika fiovana rehefa antitra ianao izay mety misy fiatraikany kely amin'ny fahatsiarovanao na ny fahaizanao misaina. Mora ny manao lisitr'ireo fiovana rehetra azo avy amin'ny taona - fahaverezan'ny fahatsiarovana, ketrona, fihenan'ny hozatra.
Ny ady atao (anti-antitra) dia mety ho lohahevitra sarotra horesahina: ady misy ankehitriny miady amin'ny dikan'ny teny eo amin'ny fikarohana sy ny fitsaboana, ary amin'ny maha-marika ho an'ny vokatra amina herisetra sy matetika amin'ny fanaovana hosoka.
Antiaging (Anti-fahanterana) izao dia manana heviny sy dikany mahazatra maromaro.
-Ao amin'ny fikarohana siantifika ataon'ny vondrom-piarahamonina siantifika (antiaging) dia miadana, misoroka, na mamadika ny fizotry ny fahanterana. Na dia manantena be aza ny ho avy, dia tsy misy teknolojia fitsaboana voaporofo sy misy ankehitriny izay mampihemotra na mamadika ny fahanteran'ny olona.
-Ao amin'ny vondrom-piarahamonina ara-pahasalamana sy mendri-kaja, ny fanafody fanoherana ny fahanterana dia midika hoe ny fahitana mialoha, ny fisorohana ary ny fitsaboana ireo aretina mifandraika amin'ny taona. Hafa mihitsy izany amin'ny fiatrehana ny fizotran'ny fahanterana, ary misy paikady sy fitsaboana maro karazana ankehitriny. Ohatra, ny fitsaboana Alzheimer, ny aretina izay misy ifandraisany amin'ny fahanterana.
-Amin'ny vondrom-piarahamonina midadasika kokoa - izay ahitana orinasa maro hosoka na tsy misy dikany - ny anti-antitra dia marika sarobidy ary fomba iray anehoana hampitomboana ny varotra.
Antiaging vovoka fampiharana
Ao anatin'izany fironana izany, ny vokatra anti-antitra dia miha-malaza hatrany. Ny fampiharana ny vovony manohitra dia:
-Siara miahy vokatra
-Ny vokatra ara-pahasalamana ara-pahasalamana
-Terinasa vokatra fitsaboana
be taona &Fitsaboana alzheimer
Ny dementia dia lasa mahazatra kokoa amin'ny taona. Manodidina ny 3% ny olona eo anelanelan'ny 65 sy 74, 19% eo anelanelan'ny 75 sy 84, ary efa ho ny antsasaky ireo mihoatra ny 85 taona no manana demonia. Ny spectrum dia miainga amin'ny fahasembanana ara-pahalalana malemy ka hatramin'ny neurodegenerative aretin'ny aretin'i Alzheimer, aretin'ny cerebrovascular, aretin'i Parkinson ary aretin'i Lou Gehrig.
Ny fahanterana no mampidi-doza indrindra amin'ny aretin'i Alzheimer. Alzheimer dia karazana dementia izay miteraka olana amin'ny fitadidiana, ny fisainana ary ny fitondran-tena. Matetika ny soritr'aretin'i Alzheimer dia mivoatra miadana ary miharatsy rehefa mandeha ny fotoana, lasa henjana mafy ka manembantsembana ny asa isan'andro. “Fantatsika fa ny taona no antony lehibe indrindra nahatonga an'i Alzheimer, ka tsy mahagaga raha nahita tanjona kendrena amin'ny zava-mahadomelina izahay,”
Ny FDA koa dia nankasitraka toa an'i Namzaric, mitambatra ao amin'ny Namenda (memantine) sy Aricept, ho an'ny fitsaboana ny aretin'ny Alzheimer mahery.
Namendais (memantine) dia nino fa miasa amin'ny alàlan'ny fifehezana ny glutamate, zavatra simika lehibe ao amin'ny atidoha. Rehefa vokarina be dia be ny glutamate dia mety hiafara amin'ny fahafatesan'ny sela maty. Satria ny antagonisma NMDA dia niasa tsy mitovy tamin'ny inhibitor cholinesterase, dia azo atokana miaraka ireo karazana rongony roa.
Vokatra vaovao maro no fantatra fa ilaina amin'ny fitsaboana ny aretin'i Alzheimer. Toy ny vovo-J-147, vovoka CMS121.
Antiaging vovoka entana
Ny vovony J-147 (1146963-51-0): J147 dia zavatra elixir amin'ny fiainana maoderina, naseho tamin'ny fitsaboana ny aretin'i Alzheimer ary ny fahanterana amin'ny voalavo ary efa saika vonona amin'ny fitsapana klinika ao amin'ny olombelona. Ny ekipa dia efa manao fandinihana fanampiny momba ireo molekiola izay novain'ny J147 amin'ny fiantraikany amin'ny mitochondrial ATP synthase - izay mety ho zava-mahadomelina no lasibatra vaovao. J147 dia nahavita ny fitiliana ny poizina takian'ny FDA amin'ny biby.
Ny vovony asidra alfa-lipoika (1077-28-7): Ny asidra alfa-lipoika dia simika mitovy amin'ny vitamina antsoina hoe antioxidant, izay midika fa mety hiaro amin'ny atidoha izy io eo ambanin'ny fahasimbana na ny ratra.
Ny asidra alfa-lipoika dia toa manampy amin'ny fisorohana ireo karazana fanimbana sela sasany ao amin'ny vatana, ary mamerina ny fatran'ny vitamina toa ny vitamin E sy ny vitaminina C. Misy koa ny porofo fa ny asidan'ny alpha-lipoic dia afaka manatsara ny fiasa sy ny famoakan'ny neuron amin'ny diabeta.
Ny fahaverezan'ny fahatsiarovana dia olana iraisan'ny olon-dehibe kokoa.Mino fa ny fahasimbana amin'ny fihenan'ny oxidative dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fahaverezan'ny fahatsiarovana.
Satria ny asidra alpha-lipoic dia antioxidant mahery, ny fandinihana dia nandinika ny fahafahany mampiadana ny fivoaran'ny aretina miavaka amin'ny fahaverezan'ny fahatsiarovana, toy ny aretin'i Alzheimer.
Ny masirasira, ny atiny, ny voa, ny spinach, ny broccoli, ary ny ovy dia loharano tsara amin'ny asidra alfa-lipoic.
Ny vovoka CMS121 (1353224-53-9): Ny geroprotectors dia singa izay mety manalefaka ny tahan'ny biby iray amin'ny alàlan'ny fikendrena ny fahanterana. Ny fandalinana vaovao dia mandinika siansa marobe ary mamantatra ny sasany miaro amin'ny aretin-kozatra amin'ny fahavoazana amin'ny alàlan'ny fahatarana ny fahanterana; ny mpikaroka dia nanisy ireny geroneuroprotectors ireny.
Ny fampiasana ireo sangan'asa ireo ho fototry ny fikarohana dia namorona kandida rongony telo Alzheimer antsoina hoe CMS121, CAD31 ary J147; nampiasa boaty sy curcumin koa ry zareo. Ny ekipa dia naneho fa ireo dimy ireo sôkôlà ireo dia mampihena ny biomarkers amin'ny fahanterana, mampitombo ny fiainana median ny totozy sy ny lalitra, ary mampihena ny famantarana ny demonia.
fisehoan-javatra amin'ny fahanterana
Ny fahanterana dia ny fiantraikan'ny fotoana eo amin'ny vatan'olombelona, ​​ary mitranga amin'ny ambaratonga maro:
-Ny fahanterana. Ny sela mifototra amin'ny isan'ny fotoana namerimberina azy ireo. Ny sela iray dia afaka mamerina mitohy 50 eo ho eo alohan'ny hamoahana ny fototarazo dia tsy azo adika tsara, izay noho ny telomeres fohy. Ny fahasimbana betsaka kokoa amin'ny sela amin'ny alàlan'ny radika maimaim-poana sy ny anton-javatra hafa, dia mila mamerimberina sela ny sela.
-Neza fahanterana. Ny hormonina dia manana antony lehibe amin'ny fahanterana, indrindra mandritra ny fitomboan'ny fahatanorana sy ny fahatanoran'ny fahatanorana. Ny haavon'ny hormonina dia miverina amin'ny fiainana. Puberty dia mitondra aca sy pores lehibe kokoa. Rehefa mihalehibe isika, ny fiovan'ny hormonina dia mitarika ny hoditra maina sy ny menopause.
-Ny fahavoazana azo. Ny fahasimbana voakaly dia ivelany daholo. Miharihary amin'ny vatana ny poizina, ny masoandro, ny sakafo manimba, ny fandotoana ary ny setroka. Rehefa mandeha ny fotoana dia mety hiteraka fahasimbana amin'ny hozatra ireo hery ivelany ireo ary latsaka ao anaty ny fahafahany mihazona sy manamboatra ireo sela, taolana ary taova.
-Meta antitra. Rehefa mandehandeha amin'ny andronao ianao, ny selao dia manodina ny sakafo hatrany ho angovo, izay mamokatra vokatra vokatr'izany. Ny fizotry ny fitrandrahana sy famoronana angovo dia manimba ny vatana rehefa mandeha ny fotoana. Misy ny mino fa ny fanalefahana ny fizotran'ny metabika amin'ny alàlan'ny fanao toy ny famerana ny kaloria dia mety harefo ny fahanterana eo amin'ny olombelona.
Ny soritr'aretina mahazatra amin'ny Alzheimer dia ahitana ny torimaso tsy mirehareha, ny fitsangatsanganana, ny korontana, ny tebiteby, ny herisetra, ny tsy fahazoana aina ary ny hakiviana. Mianatra ny mpahay siansa ny antony mahatonga ireo soritr'aretina ireo ary mandalina fitsaboana vaovao - zava-mahadomelina sy tsy mitondra otri-po.
 Mortimer RK, Johnston JR (1959). "Androm-piainan'ireo sela masirasira tsirairay". Nature. 183 (4677): 1751–1752. Bibcode: 1959Natur.183.1751M. doi: 10.1038 / 1831751a0. hdl: 2027 / mdp.39015078535278. PMID 13666896
 Ny zava-mahadomelina fanandramana mikendry ny aretin'i Alzheimer dia mampiseho vokatra manohitra ny fahanterana ”(Gazety). Salk Institute. 12 Novambra 2015. Nalaina tamin'ny 13 Novambra 2015.
 Fantatry ny mpikaroka ny tanjon'ny molekiola ao amin'ny J147, izay manakaiky ny fitsapana ara-pahasalamana hitsaboana ny aretin'i Alzheimer ”. Navoaka tamin'ny 2018-01-30.
 Fanitsiana ny fiovan'ny aretin'ny alzheimer amin'ny fiovan'ny toetrandro: famerenana ny literatiora Peter T. Nelson, Irina Alafuzoff, Eileen H. Bigio, Constantin Bouras, Heiko Braak, Nigel J. Cairns, Rudolph J. Castellani, Barbara J. Crain, Peter Davies, Kelly Del Tredici, Charles Duyckaerts, Matthew P. Frosch, Vahram Haroutunian, Patrick R. Hof, Christine M. Hulette, Bradley T. Hyman, Takeshi Iwatsubo, Kurt A. Jellinger, Gregory A. Jicha, Enikö Kövari , Walter A. Kukull, James B. Leverenz, Seth Love, Ian R. Mackenzie, David M. Mann, Eliezer Masliah, Ann C. McKee, Thomas J. Montine, John C. Morris, Julie A. Schneider, Joshua A. Sonnen, Dietmar R. Thal, John Q. Trojanowski, Juan C. Troncoso, Thomas Wisniewski, Randall L. Woltjer, Thomas G. Beach J Neuropathol Exp Neurol. Mpanoratra sora-tanana; hita ao amin'ny PMC 2013 Jan 30. Navoaka tamin'ny endrika farany novaina toy: J Neuropathol Exp Neurol. 2012 Mey; 71 (5): 362–381. doi: 10.1097 / NEN.0b013e31825018f7